kugashira » Rattan oval bread basket
Iwe uchadawo zvakare!
Smiley mwana akachengetwa mwana akabatwa - Kudya kunomuita kuseka!
Multicolored plastiki tumbler ine tsvina yakabatanidzwa yevana
Gurudza nemichero inopesana nemutambo, kurira zvishoma, kuti ufare!
5% yehuwandu hwehutori hwako huchapiwa zvakananga kuCharity Water; Mukuwedzera pakuita kuti ufare, iwewo uchaita chiito chakanaka!
Kuti uwane mamwe mashoko click here
Mutengo watengeswa uri woga.
Isu tinogara tichiedza kuwana mamiriro ezvinhu akanaka uye mutengo wevatengi vedu.
Saka tinobata zvakananga nevatori nevatengesi, ndicho chikonzero nguva yedu yekuendesa inogona kusvika kumasvondo e3 muhurukuro yakasununguka yakazara
Zvisinei, unokwanisa kusarudza kutaura pachena 48h kune 72h kuripa ..
Tinokupa mukana wekudzorera chimwe chinhu chisina kukodzera iwe mukati mezuva re14.
Ndinokutendai kuti mutitaurire ne email musati titumira nyaya yacho.
Usanonoka kubvunza isu mibvunzo yako yese pamusoro outilsdecuisine@gmail.com.
Titi yedu ichafara kukupindura iwe nokukurumidza zvichibvira, kazhinji pakati pe24 nemaawa 48, kusina mavhiki ekupedzisira uye mazororo.
Iwe unogonawo kutitumira isu nemutumwa kuburikidza nejiji redu Facebook kana nefoni pa 07.55.29.24.84.
Partager 0 Tweeter 0 chipeneti 0 Share on Fancy +1
© 2018 Copyright CookingTools.com. Kodzero dzose dzakachengetedzwa